​अवैध कलबाट ठगिदैं उपभोक्ता
काठमाडौं । केही दिनयता भाइबर, स्काइप, ह्वाट्सएप लगायतका ओटिटी सेवाबाट नेपालमा अवैध कल आउन क्रम बढेको छ ।
नम्बर नदेखिने र विदेशी मोबाइल नम्बरबाट नेपालका मोबाइल प्रयोगकर्ताको नम्बरमा फोन गरी धम्की दिने, फिरौती माग्ने, चिट्ठा परेको भन्दै झुटो प्रलोभन देखाएर रकम असुल्नेजस्ता आपराधिक गतिविधि....
​मोबाइल फोनबाट जानकारी चोर्ने एप
गुगलले एउटा एप पत्ता लगाएको छ जसले फेसबुक, ह्वाट्सएपजस्ता सोसल मिडिया एपसँगै प्रयोगकर्ताको स्मार्टफोनबाट जानकारीहरु चोर्ने गर्दछ ।
टिजी नामको यो एपले मोबाइल फोनको कल रेकर्डबाट जानकारी चोर्दछ । गुगलले एक ब्लग पोष्टमार्फत उक्त एपका विषयमा खुलासा गरेको छ ।
गुगलका अनुसार टिजी ....
एक मिनेट फोन गरेको ३०१ रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपालबाट विदेशमा फोन गर्दा प्रतिमिनेट ३०१ रुपैयाँसम्म लाग्ने गरेको छ।
स्मार्ट सेलले सार्वजनिक गरेको इन्टरनेसनल कल ट्यारिफ‍ मा उल्लेख भएअनुसार पिटक्रेन आइल्यान्ड‍मा नेपालबाट फोन गर्दा ३०१ रुपैयाँ लाग्नेगरेको छ। यो नेपालमा कुनै पनि टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीले तोकेमध्ये सबैभन्दा महँगो हो।
​विदेशबाट फोन आउँदा टेलिकमको नम्बर देखिए यसो गर्नुहोस्
न्यूजलय बिहीबार १४, मङि्सर २०७४
काठमाडौं । पछिल्लो समय विदेशबाट टेलिफोन कल आउँदा अवैद्य मार्गबाट समेत आउने गरेको पाइएकाले त्यसरी आउने फोन अवैद्य भएको भन्दै नेपाल टेलिकमले १८८ नम्बरमा फोन गरेर सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।
टेलिकमले त्यसरी आउने फोनको गुणस्तरीयता नहुने र टेलिकम कम्पनी र सरकारको राजश्वमा....
ट्वीटर चलाउँदा ध्यान दिनुहोस यी कुरामा नत्र अकाउन्ट बन्द होला
काठमाडौ । ट्विटर १४० अक्षर सम्मको पाठ्य–आधारित पोस्ट हुने गर्दछ । लेखकको रूपरेखा पृष्ठमा प्रदर्शित हुने गर्दछ, तथा दोस्रो उपयोगकर्ता अनुयायी (फलोअर)को लागि पनि पठाउन सकिन्छ ।
ट्वीटरले कसैको विरुद्धमा अफवाह फैलाउने, कसैलाई गालीगलौज गर्ने तथा धार्मिक भावनामाथि आघात पूराउने जस्ता ट्वीट गर्ने मानिसहरुलाई....
​तपाईँलाई यस्ता नम्बरबाट फोन आएको छ ? नउठाउनुहोस्
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले अपरिचित नम्बरबाट आएको फोन नउठाउन नागरिकलाई आग्रह गरेको छ । टेलिकमले अपरिचित, कलरआइडी नभएका ०१२३४५६ र १२३४५६ जस्ता नम्बरबाट आएको कल नउठाउन अनुरोध गरेको हो ।
टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा बैद्यले यस्ता नम्बरबाट आएको कलबाट ठगीने क्रम बढ्दै गएको भन्दै नागरिकको....
​टेलिभिजनमा एनालग प्रविधि कार्तिक २८ गते बाट बन्द हुँदै
काठमाडौं । सरकारले मंगलबारदेखि एनालग प्रविधिमा सञ्चालित सबै टेलिभिजन बन्द गर्ने भएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले केबल टेलिभिजन महासंघमा आबद्ध टेलिभिजनहरूलाई समेत मंगलबारबाट एनालग बन्द हुने सूचना दिन आग्रह गरेको छ ।
महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाभित्र सञ्चालित सबै एनालग प्रविधिका टेलिभिजनलाई डिजिटलमा....
​मंगलग्रह जान टिकट काट्नुभो ? २६ सय बढी नेपालीले टिकट काटिसके
न्यूजलय शुक्रबार २४, कार्तिक २०७४
काठमाडौं । मंगल ग्रहमा जानका लागि २६ सय ३६ जना नेपालीले अग्रिम टिकट बुकिङ गरेका छन् ।
नासाले जनाएअनुसार अर्को वर्षको नोभेम्बर महिनामा त्यहाँ पुग्नका लागि नेपालीहरूले उत्सुकता जनाएका हुन् । मंगल ग्रहमा जानका लागि हालसम्म विश्वभरबाट चौबीस लाखभन्दा बढीले आफ्नो नाम दर्ता गराइसकेका....
​ट्वीटरमा अक्षरको सीमा दोब्बरले बढ्यो
न्यूजलय बिहीबार २३, कार्तिक २०७४
काठमाडौं । ट्वीटरमा अक्षरको सीमा दोब्बरले बढेको छ । अहिलेसम्म प्रयोगकर्ताले केवल एक सय ४० अक्षरमा आफ्नो कुरा ट्वीट गर्न पाउँथे भने अब दुई सय ८० अक्षरमा ट्वीट गर्न पाउने भएका छन् ।
यद्यपि, चिनियाँ, जापानी तथा कोरियाली भाषामा लेख्नेहरुका लागि चाहिँ अक्षरको सीमा....